Faddeexado musuqmaasuq oo dul hoganaya Guddida Qandaraasyada Qaranka, Qaybtii 2aad | Berberanews.com
Home WARARKA Faddeexado musuqmaasuq oo dul hoganaya Guddida Qandaraasyada Qaranka, Qaybtii 2aad
Faddeexado musuqmaasuq oo dul hoganaya Guddida Qandaraasyada Qaranka, Qaybtii 2aad
Hargeysa-(Berberanews)-Akhristayaal intiinii la socotay qaybtii koowaad ee musuqmaasuqa iyo cadaalada darradada ku sallaysan eexda, qabyaalada iyo danaysiga dhaqaale ee agaasimaha Guddida Qandaraasyada qaranka. Jabarti Axmed Xasan , waxaynu qaybtan labaad ku soo qaaadan doonaa qaabka loo baahanyahay in loo maro marka dawladdu qandaraas baahis, inagoo barbar dhigi doona jidka uu agaasime Jabarti umarin habaabiyay hannaankii looga baahnaa.
Agaasime Jabarti waxa uu noqday shaqsi ku mamay malafsiga iyo khalisaada arrimaha qandaraasyada lagu bixiyo, waxanu qandaraas kasta oo la baahiyo siiyaa shirkad ama shaqsi uu lacag ka qaaday. waxanu samaystay akoon gaar ah (private Account) kaas oo lagu shubo lacagaha xaqul qalinka ah ee laga qaado muwaadiniinta raba in ay ka qayb galaan Qandaraasyada la Baahiyo.
Jabarti Axmed Xasan
dhacdooyin tiro badan oo aanu soo ururinay oo aanu idiin soo bandhigi doono.Akhriste waad la yaabi doonta cadaalad darrada iyo is daba marinta uu sameeyay Agaasime Jabarti, labadii sano ee ugu dambeeyay.
xubnaha gudida Qandaraasyada Qaranka oo u badan rag waayeel ah oo qaarkood xanuunsanayaan oo aanay inta badan iman xarunta shaqada ayaa u sahashay in uu yeesho awoodo badan oo uu u adeegsado si leexsan, xaruntana ka dhigay goob wax lagu kala dilaalo oo shirkadii ama shaqsigii aan bixin Dilaal Fiican aanu fooda soo gelin xarunta Gudida Qandaraasyada Qaranka.
Nidaamka loo baahanyahay in loo maro Qandaraaska qaranka waxaa weeye:,
in Guddiga qandaraasyadu marka shirkaduhu qandaraas u soo gudbsio laga jaraa pageka koowaad ee uu ku qoranyahay magaca shirkadda, laguna bedelaa serial number
shirkaddu markay dalbanayso qandaraas una soo gudbsiso Guddiga qandaraasyada waa inay serial number yeelataa iyadoo bilaa magac ah oo aan la aqoonsanayn magaca shirkadda.
Marka warqadaha shirkadu soo gaadho Guddiga qandaraasyadu waa inay la jartaa waxaa loo yaqaan (Identity) aqoonsi, laguna dul dhejiyaa serial nmber cusub oo aan ahayn kii shirkadda, isla sidoo kalena sticker lagu dhejiyaa warqadii la jaray.
Waxaa la gudo gelayaa qiimaynta shirkadaha, waa la eegayaa, wixii uga soo baxa ayaa la qorayaa, iyadoo loo eegayop inta shay ee laga dalbaday pageka koowaad, waxaana warbixinta la gelinayaa shirkad kasta kolomkeeda oo aan magaceeda la sheegayn ee Serial lambar ku dhejisanyahay.kii ku xigaa loo tegayaa isna sidaas si la mid ah.
inta shaqada kala saarista iyo qiimaynta shirkaduhu socdaan ROLL NUMBER uun baa socda, lamana doonayo in la ogaado shirkad qudha magaceeda, si looga durko caddaalad darro iyo musuq.
Akhristayaasha waxa aanu qaybta 3aad idiin soo gudbin doonaa shirkadaha iyo shaqsiyaadka uu sida leexsan ee sharciga baalmarsan u siiyay qandaraas, lacagaha uu ka qaatay iyo cadaymo kale oo dheeraada.
Haddii ay ku dhaaftay qabtii kowaad fadlan riix halkan oo ka akhriso
Previous articleMaraykanka oo Masar uga digay inay soo iibsato hubka Ruushka
Next articleSheeekooyinka naxdinta leh ee ku saabsan dumarka loo dilay jaceyl dartiis